Tue, 18 Aug 2015 22:29:40 +0000
Xog: Xasan Sheekh oo la kulmay xildhibaanada Mudulood (Maxaa kasoo baxay?)
Tue, 18 Aug 2015 19:21:32 +0000
Muqdisho (Caasimadda Online) – Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu casho sharaf u sameeyay dhammaan Xildhibaanada Beesha Mudulood.
Cashadii kaddib ayaa waxaa halkaa ka dhacay muran iyo dood dheer, taasoo diiradda lagu saaray xaaladda waddanka uu marayo iyo siyaasadda murugsan ee soo wajahday Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamud.
Madaxweynaha oo raadinayay inuu helo taageerada Xildhibaanada Mudulood ayaa si qoto dheer uga hadlay marxaladaha kala duwan ee la soo maray seddexdii sano ee la soo dhaafay, waxa uuna aad ugu dheeraaday waxyaabihii ka qaldamay.
Madaxweynaha ayaa aad ugu dheeraaday inuu ka hadlo in Guddoomiyaha Maxkamadda sare in uu yahay shaqsi aanan sharci ku joogin meesha. Isagoo u sababeeyay wax qabad la’aan iyo musuqmaasuq. Hal mar ayey xildhibaanada is fiiriyeen, Balse Xildhibaan Shiiraar ayaa madaxweynaha kula taliyay in aanu sidaa u dhigin hadalka waayo buu yiri, haddii uu Guddoomiyaha Maxkamadda Sare yahay sharci darro adigana waxaad noqoneysaa sharci darro.
Waxaa guntii hadalkiisu ahaa in mar kale fursad la siiyo lana taageero si uu isaga difaaco Mooshinka ka yaal Baarlamanka.
Xildhibaanada oo aad mooday in ay ku soo ballameen in aay dhageystaan hadalka madaxweynaha ayaanan u muujin madaxweynaha wax ballan qaad ah. Balse waxaa aay si wada jir ah ugu sheegeen Madaxweynaha in aay ku habboon tahay in uu dalka iyo dadka u turo xilkana iska wareejiyo inta aanan xilkana laga xayuubin, maxkamadna la soo taagin.
Madaxweynaha oo ugu danbeyntii sameeyay balanqaadyo aad u badan ayaad moodaa in Xildhibaanada aayna waxba ka soo qaadin, maadaama uu horay u sameeyay balanqaadyo kale oo badan.
XOG: Jawaari oo xaalad culus ay soo wajahday
Tue, 18 Aug 2015 16:58:59 +0000
Muqdisho (Caasimada Online) – Guddoomiyaha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa xaalad culus kasoo wajahday Mooshinka uu aqbalay ee horyaala guddoonka Baarlamaanka kadib markii culeysyo waaweyn uga yimaadeen xildhibaano iska soo horjeeda oo Mooshinka qaar wadaan, qaar kalena ay ka horjeedaan.
Xildhibaanada Mooshinka wada ayaa caawa Guddoomiye Jawaari ka dalbaday inuu Mooshinka Baarlamaanka hor keeno oo ajendaha berito ee Talaadada ah kusoo daro mar haddii mudadii uu heysan karay guddoonka soo idlaatay, Waxayna ugu hanjabeen guddoomiye Jawaari haddii uu Mooshinka hor keeni waayo Baarlamaanka inay iyagu iskood u qeybin doonaan mooshinkaasi.
Dhinaca kale Guddoomiyaha oo xalay la kulmay xildhibaanada ka horjeeda mooshinka ee taageersan Madaxweynaha ayaa uga digay Jawaari inuu Baarlamaanka hor keeno Mooshinka Madaxweynaha oo ay caddeeyeen inuu yahay mid jaban oo tiro ahaan xildhibaano laga been abuurtay ku jiraan. Waxayna si cad u sheegeen in dagaal uu ka dhici doono Baarlamaanka haddii mooshinkaasi la keeno.
Mooshinka madaxweynaha oo dhibaatooyinkan ka sokow u baahan in sharciga la waafajiyo oo qodobada lagu soo eedeeyay ay saxnimadooda sharciyeyso Maxkamadda Dastuuriga oo aan jirin ayaa waxaa culeyskiisa oo dhami dul saaran yahay Guddoomiye Jawaari oo xaalad aad u cakiran dhex fadhiya kuna bateen culeysyada heysta.
Xaaska R/W CCC oo rasaas lagu qabtay laguna xiray garoonka diyaaradaha Jomo Kenyatta..!!
Tue, 18 Aug 2015 14:32:29 +0000
Muqdisho (Caasimada Online) – Sida lagu qoray wargeyska Nairobi News ee dalka Kenya xaaska ra’iisul wasaaraha ayaa waxaa markii dambe lagu sii daayay dhamiin dhaqaalo, iyadoo loo ogolaaday iney safarkeeda sii wadato.
Xaaska ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar C/rashiid Cali ayaa daqiiqo kooban lagu xiray garoonka diyaaraha magaalada Nairobi ee dalka Kenya, kadib markii lagu helay hub ay wadatay Sabtidii lasoo dhaafay.
Ms Caasha Yaasiin Xasan, xaaska ra’iisul wasaaraha ayaa boorso ay wadatay waxaa lagu arkay 16 wareeg oo rasaas ah, markii la saaray agabka lagu baaro amaanka garoonka diyaaradaha xili ay ku sii jeeday dalka Mareykanka.
“Ms Caasha Yaasiin, waxaa loo maxkamadeyn doonaa dambiga lagu helay marka ay soo laabato”sidaasi waxaa yiri ku xigeenka taliyaha ciidamada booliska garoonka Kenya Joseph Nthenge.
Booliska ayaa sidoo kale sheegay iney wadaan baaritaano arimahaasi la xiriirta.
Su’aalo la weydiiyay xaaska ra’iisul wasaaraha ayaa waxay ku sheegtay in boorsada ay aheyd mid uu lahaa seygeeda Cumar Cabdi laakiin iyadoo deg degsan ay soo qaadatay ayna iska hubin waxa ku jira.
Xigasho Nairobi News
Xog: Xasan oo diiday is-casilaadda Xeer ilaaliya
Tue, 18 Aug 2015 12:46:34 +0000
Muqdisho (Caasimada Online) – Warar goordhaw aan ka helnay Xafiiska Madaxweynaha ee Villa Soomaaliya ayaa noo xaqiijiyay in Madaxweyne Xasan Sheekh uu ka biyo diiday in uu aqbalo iscasilaadii uu soo gudbiyay Xeer ilaaliyaha Qaranka Axmed Cali Daahir.
Madaxweynaha ayaa ku sababeeyay diidmadiisa in waqti xaadirka ah aanu aqbali karin iscasilaada Xeer ilaaliyaha waayo waddanka waxa uu ku jiraa qal-qal siyaasadeed.
Caasimadda Online oo la xiriirtay xeer ilaaliyaha ayaa ka gaabsaday in uu wax ka yiraahdo iscasilaadiisa, isaga oo noo sheegay in uu saxaafadda si toos ah ula hadli doono dhawaan.
Iyadoo aay aad u kacasantahay mowjadaha siyaasadeed ayaa dadka ka faalooda arrimaha siyaasadda waxa aay u fasiranayaan qaabab kala geddisan is casilaada xeer ilaaliyaha.
Caasimada Online oo telefoon kula xiriirtay Garyaqaan Cabdikariin Xuseen ayaa noo sheegay, in ay arrintan keeni karto dhowr arrimood, waayo buu yiri “Xeer ilaaliyaha isaga ayey shaqadiisu ahayd inuu daba gal ku sameeyo musuqmaasuqa baahay ee hay’adah dowladda isla markaasna la xisaabtamo oo sharciga hor keeno ciddii aay ku cadaato musuqmaasuq”.
“Maadaama uusan taa sameyn, aniga shaqsiyan waxa aay ila tahay in uu ogyahay haddii Madaxweynaha lagu helo oo aay ku cadaato musuqmaasuqa uu ku soo oogay Baarlabaanka, in xeer ilaaliyahana maxkamad la keeni karo taasoo uu ku muteysan karo xarig dheer. Xeer ilaaliyaha uma madax bannaaneyn howshiisa haddii si loo fiiriyo buu yiri, waayo waxa uu ahaa shaqsi loo keenay in uu dhanka kale fiiriyo. Maadaama aay hadda seefta galka kala baxeen baarlabaanka waxaa jira cabsi badan oo soo wajahday masuuliyiin badan oo aay ugu horreeyan kuwa ka shaqeeya caddaalada ayuu ku soo gaba-gabeeyay hadalkiisa”
Xog: Sirdoonka Mareykanka oo telefoonka Xasan Sheekh ka dhageysta gorgortanka Mooshinka
Tue, 18 Aug 2015 12:07:00 +0000
Muqdisho (Caasimada Onlin)-Ilo ku dhow dhow Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka ah ee Somalia Xassan Sheekh Maxamuud ayaa Caasimada Online u xaqiijiyay in Madaxweynaha uu shaki xoogan ka qabo in arrimaha Mooshinka laga dhageysto Telefoonkiisa gacanka.
Xogtu waxa ay intaa kusii dareysaa in Madaxweyne Xassan uu walaac gaar ah ka muujinaayo in Sirdoonka Mareykanka ka jooga Somalia ay Telefankiisa kala socdaan Heshiisyada dhexmaraaya isaga iyo Xildhibaanada BF Somalia ee Mooshinka ka geeyay Xassan.
Sargaal ka tirsan Xafiiska Madaxweynaha ayaa si rasmi ah Caasimada Online ugu xaqiijiyay in Xassan Sheekh uu howlaha la xiriira Mooshinkiisa iminka ku fududeeyo warqado kadib cabsi kala soo daristay dhageysiga Telefoonkiisa awgeed.
Xiliyada qaar ayaa la soo warinayaa inuu isticmaalo Telefoono kale oo ay wataan saaxiibadiisa ku wehliya Siyaasada Villa Somalia inkastoo la sheegay in iyagaba uu badi iska ilaaliyo ku hadalkooda.
Mooshinka socda ayaa waxaa gacan weyn ka geysanaaya Wakiilada Beesha Caalamka ka jooga Magaalada Muqdisho, kuwaasi oo dhowr jeer sii horeysay lagu eedeeyay inay dhageystaan Telefoonka gacanka Madaxweynaha si ay ula socdaan Siyaasada dalka gaar ahaan macluumaadka uu ku shaqeynaayo Madaxweynaha.
Awooda Mooshinka ayaa qalqal adag galisay Madaxweyne Xassan oo aan horay ula kulmin Mooshin ceynkaani ah tan iyo markii uu qabtay Xilka Madaxtinimo ee Somalia, waana tan keentay in Xildhibaanada BF ay hub dagaal u adeegsadaan keenista Mooshinada.
Mooshinka ayaa ka dhashay Khilaaf Siyaasadeed hoose oo dhexmaray Madaxweyne Xassan iyo Xildhibaano ka tirsan BF kaasi oo bilowgiisa ahaa mid ka dhashay Wakhti kororsiga, hayeeshee markii danbe isku bedelay mid shaaca laga qaaday.
Geesta kale, Madaxweyne Xassan ayaa ilaa iyo iminka aan ku guuleysan inuu kala jabiyo Xildhibaanada Mooshinka wado sababo la xiriira faragalinta ay Beesha Caalamka ku dhexwado Mooshinka iminka yaalla Maxkamada sare ee dalka.
Kay oo la shiray xildhibaanada wada mooshinka
Tue, 18 Aug 2015 12:05:03 +0000
Muqdisho (Caasimada Online) – Warar aan goordhaw ka helnay xarunta Xalane oo fadhi u ah Qaramada Midoobay xafiiskooda Soomaaliya UNSOM, ayaa waxaa sheegayaan inuu goordhaw soo idlaaday shir halkaas ku dhexmaray ergeyga gaarka ah Nicholas Kay iyo qaar ka mid ah xildhibaanada mooshinka wada.
Waxaa shirka lagu lafa guray xaaladda siyaasadda waddanka uu maraayo iyo sidii looga fogaan lahaa in uu dhaco qal-qal siyaasadeed kaa soo keeni kara xasilooni daro iyo in aay istaagaan howlaha DF aay u hayso ummadda iyo qaranka Soomaaliyeed.
Waxaa la isku af gartay in sharciga la dhowro, lagana fogaado in musuqmaasuq lagu xalliyo xiisadaha siyaasadeed ee waddanka ka jira. Caasimada Online oo la xiriirtay xafiiska saxaafadda u qaabilsan UNSOM ayaa noo sheegay in uu shirka dhacay, balse waxaa laga hadlay iyo mowqifka Qaramada midoobay iyo midka beesha caalamkaba lagu soo saari doono war saxaafadeed soo bixi doona saacadaha soo socda.
Caasimadda Online ayaa la xiriirtay qaar ka mid ah Xildhibaanadii ka qeyb galay shirkaas, kuwaasoo qabay kalsooni badan una sheegay Caasimada Online in Mooshinka uu mari doono jidka saxda ah sida ku cad Sharciga DFS iyo Dastuurkaba.
Wixii faah faahin ah dib ayaan idiinkala soo socodsiin Doonaa
QM, EU iyo AMISOM oo ka farxiyay A/Madoobe.!!
Tue, 18 Aug 2015 11:45:46 +0000
Muqdisho (Caasimada Online) – Qaramada Midoobay, Hawlgalka Midowga Afrika ee Soomaaliya (AMISOM), Urur Goboleedka IGAD, Midowga Yurub (EU) iyo Boqortooyada Midowday ee Ingiriiska (UK) ayaa ugu hambalyeeyay Sheekh Axmed Maxamed Islaam “Madoobe” doorashadii dhacday 15kii Agoosto ee loogu doortay Madaxweynaha Maamulka Ku-Meelgaarka ee Jubba (IJA).
Waxaan Sheekh Axmed Maxamed Islam “Madoobe” ugu hambalyeeynaynaa doorashadii Golaha Baarlamaanka ee Jubba ugu doortay inuu noqdo Madaxweynaha Maamulka Kumeelgaarka ee Jubba. Waxaan bogaadinaynaa sida Mudane Madoobe ay uga go’antahay inuu si dhab ah ula shaqeeyo guddigii uu dhisay Ra’iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharma’arke si xal loogu helo qaab dhismeedka Golaha Baarlamaanka ee Maamulka Ku-Meelgarka ee Jubba waxaana ku dhiirrigelinaynaa (Mudane Madoobe) in arrintan sida ugu dhakhsiyaha badan loo xalliyo iyadoo loo marayo qaab loo wada dhanyahay.
Magacyada 5 horjooge oo laga dilay Al-Shabaab!
Tue, 18 Aug 2015 10:27:03 +0000
Muqdisho (Caasimada Online) – Wararka naga soo gaaraya Gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in Ciidamada DF oo garabsanaaya kuwa AMISOM ay goordhow toogasho ku dileen ilaa 5 Horjooge ka tirsanaa Maleeshiyada Al-shabaab.
Horjoogayaashani ayaa waxaa la dilay xili ay Ciidamada isgarabsanaaya wadeen Howlgalo ka dhan ahaa Maleeshiyada kaasi oo guud ahaan dhanka Al-shabaab looga dilay inkabadan 28 Dagaalamayaal oo ay ku jiraan horjoogeyaal.
Howlgalka xoogiisa ayaa waxa uu ka dhacay dhinaca galbeed ee gobolka Hiiraan,iyadoona halkaasi lagu soo bandhigay Meydadka Al-shabaabkii la dilay.
Meydadka Maleeshiyada ayaa la geeyay tuullada Luuq Jeelow oo qiyaastii 20 km ka xigta magaalada Beledweyne si dadka deegaanka loo tuso awooda Maleeshiyaadka.
Meydadka Horjoogayayaasha lasoo bandhigay ayaa waxaa kamid ahaa:-
1- Horjoogihii Maleeshiyada ugu magacownaa deegaanka Ceel Cade Abuukar Xaaji Xabiibulah.
2- Horjoogihii Maleeshiyada ugu magacownaa degaanka Buq-aqable Yusuf Sheikh Da’ud
3- Horjoogihii Maleeshiyada ugu magacownaa Tuulada Luuq-Jeelow Max’ed Cali Cumar Dhuxul.
4-Madaxa Maaliyada Maleeshiyada Al-shabaab ee Gobolka Hiiraan Cabdullhi Warsade iyo horjooge kale oo aan magaciisa weli la sheegin.
Inta uu howlgalka socday ayaa waxa ay sidoo kale Ciidamada isgarabsanaaya gacanta ku dhigeen mid kamid ahaa Madax jabinta Maleeshiyaadka, halka tiro kalena ay ku toogteen nolosha, kadib markii ay isku dayeen inay ka baxsadaan Ciidamada Huwanta.
Howlgalkaani ayaa noqonaayo kii ugu xumaa ee soo maray Maleeshiyaadka ka dagaalama Gobolka Hiiraan iyo Deegaanada hoostaga.
Arag Sawirrada: Axmed Madoobe oo maanta soo bandhigay Ciidamada uu ku sal ballaarsan lahaa
Tue, 18 Aug 2015 09:50:53 +0000
Muqdisho (Caasimada Online) – Waxaa magaalada Kismaayo ka socda qorsho dagaal oo uu wado Hogaamiyaha Maamulka Jubbaland Axmed Madoobe kaasi oo ay Ciidamadu ku doonayaan inay ku sal ballaarsadaan.
Hogaamiyaha ayaa Saraakiisha Ciidamada ku amray inay heegan galiyaan Ciidamada Maamulka, islamarkaana ay u diyaar garooban Dagaal dhul ballaarsi ah.
Inta badan Ciidamadan ayaa waxaa iminka lagu uruurinayaa deegaanka Buuloguduud ee gobolka Jubbada Hoose, halkaasi oo saldhig KMG ah oo ay ka duulaan Ciidamada laga dhigay.
Saraakiisha ciidamada ayaa balan qaaday inay si hufan u oofin doonaan amarada kasoo baxa Xafiiska Hogaamiyaha Jubbaland iyo Taliska Ciidamada Militeriga.
Warqad caddeyn ah: Siyaasi si aad u dhaliili jiray dowladda Soomaaliya oo xil lagu abaal mariyay!!
Tue, 18 Aug 2015 09:03:27 +0000
Muqdisho (Caasimada Online) – Wareegto kasoo baxday xafiiska Ra’iisul wasaaraha DF Somalia Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa waxaa lagu magacaabay xoghayaha Joogtada KMG ee Wasaaradda Arimaha gudaha iyo Federaalka.
Xoghayaha jootada ee Wasaarada Arimaha Gudaha ayaa loo magacaabay aqoonyahan Prof Yaxye Cali Ibraahin Hareeri oo kamid ahaa Maamulka Sare ee Jaamacadda SIU ee ka howlgasha Magaalada Muqdisho ee Caasimada dalka.
Sidoo kale, Xoghayaha jootada Prof Yaxye Cali Ibraahin Hareeri, ayaa kamid ahaa Siyaasiyiinta inta badan ka faaloon jirtay Arrimaha Siyaasada Somalia waxa ayna Digreetada lagu magacaabay u qorneyd sida tan:-